Semalt: Ungamisa kanjani i-WordPress Trackback & amp; Isigaxekile se-Pingback
Semalt: Ungamisa kanjani i-WordPress Trackback & Isigaxekile se-Pingback
Ukulandelana kwezintambo kanye nezinkinga zokubheka kuyindlela enhle kakhulu yabamemezeli nababhlogi bezokwabelana ngolwazi nabalandeli babo futhi baqhubeke nezingxoxo ezinengqondo neziwusizo nabafundi nabalandeli ngokubhala kwabo. Ama-trackbacks akholelwa ukuthi angaphandle kwamazwana we-WordPress. Isibonelo, uma iwebhusayithi isebenzisa isofthiwe yokubhuloga ehlukile kanye nezixhumanisi ezihlokweni zakho, izothumela ngokuzenzakalelayo izaziso zokukwazisa ngemisebenzi yayo. Ngakolunye uhlangothi, amaphuzu ayingqayizivele ku-WordPress. Kusho ukuthi umuntu angaxhumana nezihloko zakho noma okuthunyelwe kwebhulogi uma nje kokubili usebenzisa i-WordPress njengendlela yokuphatha okuqukethwe okuyisisekelo - филиппе гранди мебель. Kuleso simo, amawebhusayithi akho womabili kufanele akwazi ukunikeza amaphutha ukuze okuthunyelwe kungabhekiswa kahle. Abaningi bogaxekile baqhubeka begaxekile ukulandelela imigwaqo kanye nemingcele nsuku zonke.
Akudingeki ukhathazeke njengoFrank Abagnale, isazi esihamba phambili esivela ku Semalt , sinikeza ezinye izindlela ezilula zokuzilandela ukuze uziqede futhi uzivimbele esikhathini esizayo.
I-Topsy Blocker isebenza ngezindlela ezihlukene, futhi ihlose ukuhlaziya ukulandelwa kwe-trackbacks kanye nokuphazamiseka kwesayithi lakho elithola nsuku zonke. Ihlola futhi imibono yakho futhi ususe imithombo engekho emthethweni njenge-topsy..i-com. Uma umthumeli ephuma ukuba avele kunoma yikuphi amawebhusayithi anjalo, i-trackbacks ne-pingbacks izobekwa njengogaxekile ngokuzenzakalelayo. Udinga nje ukufaka futhi usebenze leli thuluzi ukuze uqinisekise ukuthi isayithi lakho lihlala likhululekile kumazwana wokugaxekile, amaphuzu, kanye namathrekhi.
Kuphephile ukusho ukuthi i-Antispam Bee iyinhlangano evelele futhi enamandla kunazo zonke kubasebenzisi be-WordPress. Inokufakwa okungaphezu kuka-200,000 okusebenzayo futhi kuyona kuphela okukhethwa ukuqinisekiswa kwe-trackingbacks kanye ne-pingbacks kalula. Ngaphezu kwalokho, leli thuluzi lihlola imibono enembile kakhulu futhi lisuse amazwana angalungile kusuka kuwebhusayithi yakho. Ungayifaka ku-Izilungiselelo> I-Antispam Bee inketho, futhi uhlelo lukhululekile. Izilungiselelo zayo ezizenzakalelayo zingahle zihlelwe nganoma isiphi isikhathi, ngokuya ngezidingo zakho kanye niche yebhulogi. Noma kunjalo, izilungiselelo zayo ezizenzakalelayo zanele ukuhamba uma unayo ibhulogi yangasese noma iwebhusayithi yokuqalisa.
I-WP-SpamShield uhlelo oluhle futhi olumangalisayo okufanele ulucabangele njengoba lusiza ukuqeda amaphuzu kanye nezindlela zokulandelela. It ngokuzenzakalelayo ifaka Captcha kusayithi lakho bese ucela zonke izivakashi ukungena lelo Captcha ngezinjongo zokuqinisekisa. Noma kunjalo, abanye abafundi bakho bangase bangaqiniseki ngenqubo yokuqinisekisa ukuze ukwazi ukuyihlela ngokufanele. Lolu hlelo ngeke luvimbele i-bots elizokhahlela ibhulogi yakho noma iwebhusayithi. Esikhundleni salokho, uzosusa amazwana wokugaxekile, futhi le plugin isebenza ngokufana nama-firewalls. Amazwana wogaxekile avinjelwe wona, kodwa ungakwazi ukumisa izilungiselelo kusuka endaweni yomqondisi bese uchofoze ku-Izilungiselelo> I-WP-SpamShield.
Isiphetho - Maka ngokuzenzekelayo amazwana njengogaxekile uma aqukethe amagama angukhiye amacici:
Ngaphandle kwalezi zindlela ezingenhla, i-WordPress isenza sihlole ukuphawula, ama-pingbacks, nama-trackbacks kalula ukuze sikwazi ukumaka ugaxekile uma kukhona okungafani. Noma yikuphi ukuphawula okuqukethe amagama angukhiye noma imishwana kufanele kuvinjelwe futhi kususwe kusuka kokuthunyelwe kwakho kweso. Ngisho noma ungawamukeli izaziso, kufanele umane ususe lawo mazwana avela endaweni yakho ye-WordPress.